Qarax labaad oo goor dhow ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyey | Baydhabo Online
Qarax labaad oo goor dhow ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyey
Qarax labaad oo ismiidaamin ah ayaa daqiiqado ka hor abaara 2:20 daqiiqo duhurnimo waxaa uu ka dhacay Magaalada Muqdisho caasimada Somalia.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in qaraxan dambe uu ka dhacay agagaarka isbitaalka Banaadir wadada u baxda Ex-kontrol Afgooye oo ciidamada nabad sugidu ku leeyihiin bar control oo gaadiidka lagu baaro.
“Gaariga Waxaa markii hore joojiyey ciidamada ku sugnaa barta control, waxaa ka soo degay nin bastoolad watay, wuxuu dilay Mid ka mid ah ciidankii meesha joogay, askari kale ayaa isna isla goobtii ku dilay, wax yar ka dibna waxaa qarxay gaariga uu ka soo degay ninka la dilay” ayuu yiri goob jooge halkaas ka dhowaa oo la hadlay Allbanaadir.com, isagoo xusay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray shacab halkaas ku dhowaa.
Waxaa goobtaas gaaray ciidamada amaanka oo wada baaritaano sidoo kale gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaa ku baxay.
Qaraxa hore oo xiligii salaada Jimcaha ka dhacay bar control oo ciidamada nabad sugidu ku leeyihiin wadada u baxda garoonka Aadan cadde ayaa waxaa isna loo adeegsaday gaari miineysan oo uu waday qof isa soo miidaamiyey balse ciidamada halkaas ku sugnaa ayaa la sheegay iney fashiliyeen qofkii waday gaariga keligiis ayaana ku dhintay.
Labada qarax ayaa waxaa u dhexeeyey wax ka yar labo saacadood, iyadoo laamaha amaanka dowlada aysan weli ka hadlin qaraxyadan.